Забур 8 CARS - Nnwom 8 ASCB
1Ao Awurade, yɛn Awurade,
wo din kɛseyɛ ada adi ewiase afanan nyinaa.
atimtim ɔsoro nohoa,
2mmɔfra ne nkɔkoaa mpo de wɔn ano
kamfo wo, wʼatamfoɔ nti;
na wode bɔ atamfoɔ ne weretɔfoɔ ano.
3Sɛ mehwɛ wo soro,
ɔsrane ne nsoromma a
4onipa ne hwan a wokae no,
5Wobɔɔ no ma ɔyɛɛ akumaa kakra sene abɔfoɔ
na wode wʼanimuonyam ne anidie abɔ no abotire.
6Woyɛɛ no sodifoɔ maa wo nsa ano adwuma
wode nneɛma nyinaa ahyɛ ne nan ase:
7nnwankuo ne nantwikuo nyinaa
ne wiram mmoa nso,
ne ɛpo mu mpataa,
deɛ ɛnenam ɛpo mu akwan so nyinaa.
9Ao, Awurade, yɛn Awurade,
wo din yɛ kɛseɛ wɔ asase nyinaa so!
ASCB : Nnwom 8